Akụkọ - Ihe edeturu maka otu esi eji teepu mmiri mmiri na -amị mmiri abụọ!
Ihe edeturu maka otu esi eji teepu mmiri mmiri na -amị mmiri abụọ!
1. Mgbe a na -eji teepu ịgba mmiri mmiri n'okpuru ihe nkiri ugbo, n'ihi ìhè anyanwụ, mmiri dị n'elu ga -apụ n'anya, ọ ga -abanyekwa n'ime obere ntụpọ mmiri na ihe nkiri ugbo. Mpekere mmiri ndị a ga -etolite oghere. N'okpuru anya kwesịrị ekwesị na ọnọdụ anwụ anwụ, mmiri mmiri na -atachapụ Anya oghere ga -abụ ebe na -ekpo ọkụ, nke ga -agba teepu nta ahụ ọkụ ma ọ bụ gbaa obere oghere ọkụ. Iji gbochie ụdị nsogbu a ime, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na -eji ya:
Jiri ihe nkiri mulch gbara ọchịchịrị, ihe nkiri mulch ojii kacha mma, ọ bụrụ na ị na -eji ihe nkiri mulch transperent, ị kwesịrị ị na -eli teepu nta ahụ ma ọ bụ jiri obere ala kpuchie mulch iji gbochie ọkụ siri ike ịbanye na fim mulch.
Mgbe ị na-eji ya, debe ọkwa ala ka o kwere mee, tinyekwa ọgwụ kwesịrị ekwesị nke ahịhịa ahịhịa tupu ị kụọ iji gbochie ahihia ka ọ ghara itolite ma ọ bụ ihe mgbochi ala na-ejigide mulch, na-eme ka vepo mmiri gbakọta na ahịhịa. mepụta obere mmiri mmiri.
2. Ekwesịrị iji ụmụ ahụhụ na -egbu ahụhụ mee ihe kwesịrị ekwesị mgbe ihe ọkụkụ na -eto, a ga -egbukwa ọgwụ ahụhụ n'oge iji gbochie ihe ọkụkụ na eriri eriri mmiri na -amị amị ka ọ taa ma mebie ya.
3. Mgbe etinyere teepu mmiri ntapu mmiri ahụ site na igwe, ọ dị mkpa iji gbochie teepu mmiri ịgba mmiri ka igwe ahụ wee kpụchaa ya.
4. Mgbe ị na -etinye teepu mmiri mmiri na -amị mmiri, akụkụ ya na onye na -amị mmiri kwesịrị ịdị na -eche ihu, na ike kwesịrị ịdị n'otu mgbe agbatịkwara ya, na teepu mmiri mmiri na -amị mmiri ga -edozikwa nke ọma.
5. A naghị ekwe ka ịrụ ọrụ ugbo n'ofe ubi, a machibidoro ya iwu maka igwe na anụ ụlọ ịzọpịa ma ọ bụ zọgide eriri mmiri mmiri nta mmiri.
6. A ga -eji mmiri nzacha nta nke na -abanye na eriri mmiri mmiri nta ahụ ga -ahazi ya.
Oge ezipụ: Mee-31-2021